Yaa dooranaya madaxweynaha maamulka gobollada Dhexe? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Iyadoo shalay uu magaaada Cadaado ka furmay wajiga 2-aad ee shirka maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud wayaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) wuxuu kala cadeeyey howshada u taalla ergada iyo howsha u taalla Odayaasha dhaqanka.
Wasiir Odawaa ayaa sheegay in waajibaadka saaran ergooyinka uu yahay ansixinta qabyo qoraalka ee axdiga KMG ee Maamul u sameynta Gobollada Dhexe.
Sidoo kale, wuxuu sheegay Odawaa in odayaasha dhaqanka ee beelaha Mudug iyo Galgaduud looga fadhiyo soo xulista Xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka la dhisi doono, iyagoo horayna usoo xulay ergada la doonayo iney ansixiyaan dastuurka maamulka.
“Mas’uuliyada ergada waa ansixinta Axdiga KMG, doorashada Madaxweynaha Mudug iyo Galgaduud waxaa is ka leh Baarlamaanka, Odayaasha dhaqanka ayaana wixii maanta ka dambeeya soo xuli doona Xildhibaanada”ayuu yiri Wasiir Odawaa.
Ra’iisul Wasaaraha oo shalay ka hadlayay furitaanka shirka wajiga labaad ee maamul u sameynta Gobollada Dhexe ayaa ka dalbaday in shirka lagu soo gaba gabeeyo ka hor inta aanu dhamaan bisha Ramadaan ee soo socota.